string ကို quartet နှင့်ဂစ်တာများအတွက် Ophelia - ဒါဝိဒ်သည် Warin ရှောလမုန်သည် '' ဂီတ Catalog
Home / ကရိယာတန်းဆာပလာနှင့်ဆိုင်သော / strings / string ကို quartets / string ကို quartet နှင့်ဂစ်တာများအတွက် Ophelia
Categories: string ကို quartets, la Folia အပြောင်းအလဲတွေဟာ, la Folia
Ophelia သူမ၏အသတ်ခံဖခင်များအတွက်ဝမ်းနည်းခြင်းထဲကသူမ၏စိတ်ကိုဆုံးရှုံးသောရှိတ်စပီးယားရဲ့ကစား Hamlet အတွက်မြင်ကွင်းတစ်ခုငါ့သီချင်း setting ကိုအပေါ်အခြေခံပါတယ်။
ဂီတအတွက်အတွက် Model ဆိုင်းစိတ်သူမ၏ပြည်နယ်လိုက်နာပါ။
အဓိကသီချင်းဆို (မူရင်းအတွက် Ophelia ရဲ့အသံကို) ကိုပုလွေအားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားသည်။
အဆိုပါ cello ကစားနှေးဆောင်ပုဒ်ပျေါတူဂီ ", La Folia" သီချင်းဆိုအပေါ်အခြေခံသည်။
အောက်ပါအတိုင်းအတွက် Model အပြောင်းအလဲများကိုနေသောခေါင်းစဉ်:
အဆိုပါ mode ကို Phrygian အဘိဓါန် (ဃအသေးစားပေမယ့်ဒုတိယလျှော့ချနှင့်အတူ) အတွက်စတင်သည်။
Kalyan Theta (နှင့်အတူအဓိကစတုတ္ထကြီးပြင်း) အားထို့နောက် Khamaj Theta (လျှော့ချသတ္တမနှင့်အတူအဓိက) မှအဆိုပါ Modes သာအပြောင်းအလဲများ Ophelia ခေါင်းနှစ်လုံး ပို. ပင်အလင်းဖြစ်လာအဖြစ်။
အဆိုပါ rhythms ဒီယာယီလျှပ်အလေးပေးထားတဲ့ dotted နှင့် Scotch SNAP သို့စွ။
ဘယ်အချိန်မှာသူမ "? သူသည်နောက်တဖန်မလာပါလိမ့်မယ်" ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအပေါ် ruminate မှ Marva Theta (အဓိကပေမယ့်ဒုတိယပြားနှင့်စတုတ္ထကြီးပြင်းနှင့်အတူ) ဖို့ mode ကိုအပြောင်းအလဲများကိုစတင်ပေမယ့်လုပ်သူများယခုသူမစတင်ဘယ်မှာထက် semitone ပိုမိုမြင့်မားသည်။
သူမကသူမ၏ကံကြမ္မာကိုကိုယ်ကိုရာထူးမှနုတ်ထွက်ပြီးအဖြစ် mode ကိုအဆုံးမှာပိုမိုအကျွမ်းတဝင်အသေးအဖှဲ (Aeolian) အားနောက်ဆုံးတော့ပြောင်းလဲစေပါသည်။
"string ကို quartet နှင့်ဂစ်တာများအတွက် Ophelia" ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ် ပြန်ကြားချက် Cancel
la Folia - 5th လှုပ်ရှားမှု - Ophelia ရဲ့ရူးသွပ်မြင်ကွင်းတစ်ခုဆိုသံဗားရှင်း
ပုလွေများနှင့် string ကိုသံစုံတီးဝိုင်းသို့မဟုတ် string ကို quartet အဘို့အကြှနျုပျ၏ဥယျာဉ်ထဲမှာနေတဲ့နှင်းဆီလည်းမရှိ
bassoons နှင့် string ကိုသံစုံတီးဝိုင်းသို့မဟုတ် string ကို quartet အဘို့အကြှနျုပျ၏ဥယျာဉ်ထဲမှာနေတဲ့နှင်းဆီလည်းမရှိ ရော်ဘင် hood ကို string ကို quartet ဘို့ကခုန်ဖို့ Hereford ၏ဘိရှော့ပ်ကတွန်းအားပေး
သင်ကြည့်ပါတယ်: string ကို quartet နှင့်ဂစ်တာများအတွက် Ophelia